स्विस बैंकमा खाता कसरी खोलिन्छ ? – जीवनशैली
स्विस बैंकमा खाता कसरी खोलिन्छ ?
Home /टिप्स एण्ड ट्रिक्स/स्विस बैंकमा खाता कसरी खोलिन्छ ?
हामीहरूले बेलाबेलामा स्विस बैंकको नाम सुन्ने गरेका छौँ। कतिपय नेताहरूले पनि स्विस बैंका खाता खोलेर पैसा राख्ने गरेको पनि सुनिएको हो। ‘उहाँले स्विस बैंकमा खाता खोलेर पैसा राख्नु भएको छ’ भन्दै नेपाली राजनीतिमा नेताहरूले एकले अर्कालाई आरोप लगाउने गरेका छन्।
विशेषगरि विश्वभरका कालोधन हुनेहरूले स्विस बैंकमा पैसा राख्छन् भन्ने मान्यता छ। तर, स्विस बैंकमा पैसा राख्न वा खाता खोल्न सजिलो भने छैन। आउनुहोस जनौँ कसरी सकिन्छ स्विस बैंकमा खाता खोल्न भनेर :
स्विस बैंकमा खाता खोल्न कम्तिमा पनि एक करोड आठ लाख नेपाली रुपैयाँभन्दा धेरै पैसा चाहिन्छ। बैंकले रेकर्डका लागि निकै धेरै कागजात पनि मागको हुन्छ। यसमा राहदानीको वास्तविक कपीलगायतका कागजात हुन्छन्।
यो बैंकबाट कारोबार गर्दा ग्राहकले आफ्नो नाम होइन, आफूलाई दिइएको नम्बर आइडीको प्रयोग गर्छन्। त्यसलाई नम्बर एकाउन्ट भनिन्छ । यति मात्र होइन, यहाँबाट कारोबार गर्न प्रत्येक पटक खातावाला आफैं स्वयं बैंकमा उपस्थित हुनु पर्ने हुन्छ ।
यो खाता खोलेपछि बैंकलाई बर्सेनि ३२ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्ने हुन्छ। स्विट्जरल्यान्डमा करिब ४ सय बैंक छन्। यी कुनै पनि बैंकले त्यहाँ खाता खोल्नेबारे जानकारी दिँदैनन्। त्यसैले पनि कालो धन हुनेहरूले स्विट्जरल्यान्डका बैंकमा खाता खोल्न प्राथमिकता दिन्छन्।
आँखालाई शक्ति प्रदान गर्ने ७ खानाकुरा